Stepper Motor, DC Stepper Motor, Bldc Motor, gear Stepper Motor - Prostepper
hybrid loop xiran motor labanlaabo
Dabakho hybrid motor labanlaabo
sax High motor lugaha hybrid
xawaaraha sare ee dhaqdhaqaaqa lugaha hybrid
IP65 motor lugaha hybrid
Caadiga ah laba-waji motor lugaha hybrid
Saddex-waji motor lugaha hybrid
PROSTEPPER waa mid ka mid ah soo saaraha ugu weyn ee matoorrada ee Shiinaha. Waxaan diiradda on R & D iyo soo saaraha of motor labanlaabo, BLDC motor, magnet joogto ah motor synchronous, AC inta jeer Howlsocodsiinta motor diinta, mashiinka qalabka gacanta motor, motor dunmiiqa, encoder iyo accessories motor la xiriira. Waxaan nahay heer-sare-qeybiyaha xal motor of qalabaynta warshadaha iyo culuumta caafimaadka, waxaan wada leh in ka badan 30 shirkado caalami ah taasoo keentay caalamka oo dhan oo iyaga la siiyaa xal hal abuur iyo wax soo saarka oo tayo sare leh. PROSTEPPER xalliyo si ay u taageeraan dunida la hufan, keydinta tamarta iyo deegaanka saaxiibtinimo.
PROSTEPPER caasimada ka diiwaan gashan yahay 12 million yuan, meesha warshad waa 12,000 oo mitir oo laba jibbaaran, iyo goobta soo saarka waa 10,000 oo mitir oo laba jibbaaran, wax soo saarka sannad kasta waa 1,500,000sets ...
aasaasaha PROSTEPPER Mr. Xuhong Ding, bilaabaan ganacsi motor 1998, oo loo tababaray koox xirfad iyo shaqo xasilloon tan iyo then.Till hadda shaqaalaha kooxda arsaaqa ...
PROSTEPPER qaadataa mas'uuliyadda si ay u horumariyaan tayada iyo tamarta alaabta baabuurta hufan. Waxaan sidoo kale diiradda saaraan dhismaha a ganacsi saaxiibtinimo deegaanka ...
NEMA 23 Close Loop Stepping Motor (1000CPR 55mm ...
NEMA 34 Stepping Motor (3.0Nm 60 mili)
NEMA 23 Stepping Motor (2.0Nm 76mm)
NEMA 17 Stepping Motor (0.72Nm 61mm)
design ugu dambeeyey
NEMA 34 Stepping Motor Iyada oo Xoola ah Gear Box (68mm)
NEMA 34 Stepping Motor Iyadoo Biriigu (8.2Nm 120mm)
NEMA 23 Stepping Motor Iyadoo Biriigu (76mm 2.0Nm)
NEMA 17 cover dhamaadka Lab Motor Stepping (49mm 0,48 ...
waxyaabaha motor PROSTEPPER ee loo isticmaalo beeraha iyo goobaha badan, sida printer 3D, mishiinka dhar, qalabka mashiinka CNC, mishiinada dharka, mashiinada baakooyinka, qalab caafimaad, processing suunka silig iyo warshadaha kale. Waxaan nahay qeybiyaha motor-dhamaadka sare ah in industry ee qalabaynta guriga, oo uu ahaa soo saaraha qeexay by tirada shirkadaha caalami ahaan caan ku Maraykanka, Yurub, South Korea iyo wixii la mid ah.
B2, Hutang warshadaha Park, Hutang Town, Degmada Wujin, Changzhou, Gobolka Jiangsu, Shiinaha
News Oo Dhacdooyinka
American is Technology Expo / West ...
2018 SPS IPC kaxeeya Martiqaad
CCTV 9 wareysi iyo warbixin u PROSTEPPER ...